Samachar Batika || News from Nepal » होलीमा प्रयोग हुने विशेष ५ रंगको अर्थ के हुन्छ ? :ज्योतिषशास्त्र
होलीमा प्रयोग हुने विशेष ५ रंगको अर्थ के हुन्छ ? :ज्योतिषशास्त्र
आज रंगहरुको पर्व होली हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरुमा मनाइँदै छ । भोलि तराईका जिल्लाहरुमा होली मनाउने गरिन्छ । होलीमा रंगहरुको आफ्नै महत्व हुने गर्दछ । यसका साथै ज्योतिषशास्त्रमा पनि रंगको अर्थबारे विशेष चर्चा गरिएको पाइन्छ ।
शास्त्रमा ९ ग्रह अनुसार रंगको महत्व रहने गरेको छ । ग्रहअनुसार कुन रंग कसको प्रतिक मानिन्छ भन्ने कुरा शास्त्रमा उल्लेख छ ।
१. सेतो रंग
सेतो रंगलाई सात्विक स्वरूपका रूपमा लिइन्छ । सत्व भनेको शान्ति, निर्मल, पवित्र, आयु, आरोग्यको संकेत हो । चन्द्रमा र शुक्रलाई सत्व स्वरूपको मानिन्छ । यसले अन्य रंगलाई नि’षेध गर्दछ । अन्य रंगलाई प्रतिस्थापन गर्न यो सक्षम रहन्छ ।
२. रातो रंग
रातो रंगलाई वैदिक अवस्थाको रजोगुण मानिन्छ । रातो रंग प्रेमको प्रतिक हो । तर शास्त्रमा यो युद्ध र क्रोधको प्रतीक हो । मंगल र सूर्यको राशिगत रंग रातो हुन्छ । स्थान र परम्पराका आधारमा यो नि’षेधात्मक संकेतका रूपमा लिइन्छ ।
३. कालो रंग
कालो रंगलाई तमोगुण अर्थात् अज्ञान, अन्धकारका रूपमा मानिन्छ । अज्ञान, अराजक, असफलताको संकेतका रूपमा कालो रङ प्रयोग गरीन्छ । तापक्रम र उज्यालोलाई यस रंगले शोषण गर्दछ । यो रंग भएका ग्रहहरूमा शनि, राहु, केतु पर्दछन् ।
नीलो रंगलाई विशालता, गाम्भीर्य, स्निग्धताको प्रतीकका रूपमा लिइन्छ । केतु र राहुले यसमा विशेष प्रभाव पार्दछन् । अकाशको रंग संग मिल्ने भएकाले यसलाई समन्वय र शान्तिको प्रतिविम्ब पनि मानिन्छ ।
पहेँलो रंगलाई सात्विक आहारविहार, स्वच्छन्दताका रूपमा लिइन्छ । यो रंग पनि प्रेमभावको प्रतीकका रुपमा रहने गर्द । बृहस्पति ग्रहको रंग पहेँलो मानिन्छ । धन र मीन राशिमा पहेलो रंगको विशेष प्रभाव पर्दछ । बुध पनि पहेँलो नै मानिन्छ ।
५. हरियो रंग
हरियो रंग शान्तिदायक, निर्मल, सहनशील मानिन्छ । प्राकृतिक रंगका रुपमा मानिने हरियो रंग आनन्ददायक हुन्छ । अरुभन्दा शान्त, प्रमाणहीन मानिने यो रङको प्रभाव विशेष बुधग्रहमा पर्दछ । राशिगत रूपमा कन्या र मिथुन राशिमा हरियो रंगको प्रभाव रहन्छ ।
होलीमा रंगहरुको आफ्नै महत्व हुने गर्दछ । यसका साथै ज्योतिषशास्त्रमा पनि रंगको अर्थबारे विशेष चर्चा गरिएको पाइन्छ ।शास्त्रमा ९ ग्रह अनुसार रंगको महत्व रहने गरेको छ । ग्रहअनुसार कुन रंग कसको प्रतिक मानिन्छ भन्ने कुरा शास्त्रमा उल्लेख छ । जुन को बारेमा माथी चर्चा/परीचर्चा गरीसकेका छौ ।
प्रकाशित मिति २६ फाल्गुन २०७६, सोमबार ०४:०७